ပရင်တာအလုပ်မလုပ်ပါဘူး: ACTIVE DIRECTORY DOMAIN န်ဆောင်မှုများယခုရရှိနိုင် - ပုံနှိပ်စက် - 2019
၏ပြဿနာဖြေရှင်းရေး "Active Directory ကိုဒိုမိန်းန်ဆောင်မှုများမရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်"
သင်တစ်ဦးချိတ်ဆက်ပရင်တာ print ထုတ်မယ့်စာရွက်စာတမ်းပေးပို့ရန်ကြိုးစားသောအခါတခါတရံသူ၏ကွန်ပျူတာကော်ပိုရေးရှင်းသို့မဟုတ် home network ကိုချိတ်ဆက်အသုံးပြုသူများ Active Directory Domain န်ဆောင်မှုများအလုပ်နှင့်အတူရင်ဆိုင်ခဲ့ရသည်။ အေဒီကို Windows operating system ကိုတစ်ခုအရာဝတ္ထုသိုလှောင်မှုနည်းပညာနှင့်အချို့သော command များ၏သေဒဏ်စီရင်များအတွက်တာဝန်ရှိသည်။ နောက်တစ်ခုကျွန်တော်မှားယွင်းမှုတစ်ခုဖြစ်ပေါ်လျှင်အဘယ်သို့ပြုရမည်အကြောင်းပြောဆိုကြလိမ့်မည် "Active Directory ကိုဒိုမိန်းန်ဆောင်မှုများမရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည်" သငျသညျဖိုင်ကို print ထုတ်ရန်ကြိုးစားသောအခါ။
ကြှနျုပျတို့သညျ "မရှိတော့ရရှိနိုင်ပါသည် Active Directory Domain န်ဆောင်မှုများ" ၏ပြဿနာကိုဖြေရှင်းပေး
ဒီအမှားဖြစ်ပေါ်စေသည်ဟုအများအပြားအကြောင်းပြချက်ရှိပါတယ်။ မကြာခဏသူတို့ကဝန်ဆောင်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေကြသည်မဟုတ်ထက်သူတို့အပေါ်လှည့်မရနိုငျဒါမှမဟုတ်သူတို့အချို့သောအခြေအနေများကြောင့်လက်လှမ်းမရှိကြပါဘူး။ ကျနော်တို့၎င်း၏ကိုယ်ပိုင် algorithm ကိုရှိပြီးရှုပ်ထွေးမှုအရေးယူဖြင့်သွင်ပြင်လက္ခဏာဖြစ်ပါတယ်တစ်ဦးချင်းစီ၏ကွဲပြားခြားနားသောမျိုးကွဲဖြင့်ပြဿနာကိုဖြေရှင်း။ အများဆုံးရိုးရှင်းသောနှင့်အတူစတင်ဖွင့်ကြပါစို့။
ရုံသမဝါယမကွန်ယက်တွင်အလုပ်မှာကွန်ပျူတာ၏နာမတော်ကိုပြောင်းလဲထားပြီးလျှင်, ပြဿနာဖြစ်စေခြင်းငှါသတိပြုပါချင်တယ်။ ဤကိစ္စတွင်ခုနှစ်, ငါတို့သည်သင်တို့၏စနစ်ကစီမံခန့်ခွဲသူထံမှအကူအညီရှာအကြံပြုပါသည်။
Method ကို 1: အုပ်ချုပ်သူအဖြစ်ပေါ် Log
သင်တစ်ဦးနေအိမ်ကွန်ယက်ကို အသုံးပြု. နှင့်စီမံခန့်ခွဲသူအကောင့်ကိုသုံးခွင့်ရှိသည်နေတယ်ဆိုရင်, ဤအပိုင်းကိုအော operating system ကိုထည့်သွင်းခြင်းနှင့်တစ်ချိန်ကနောက်တဖန်သင်အလိုရှိတဲ့ device ကိုသုံးပြီး print ထုတ်မယ့်စာရွက်စာတမ်းပေးပို့ဖို့ကြိုးစားရန်သေချာစေပါ။ ထိုကဲ့သို့သော input ကိုဖျော်ဖြေဖို့ဘယ်လိုအသေးစိတ်အောက်ပါလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ကတခြားဆောင်းပါးဖတ်ပါ။
အသေးစိတ်: Windows တွင် "အုပ်ချုပ်ရေးမှူး" ဟုအဆိုပါအကောင့်ကိုသုံးပါ
Method ကို 2: default အနေနဲ့ပရင်တာအသုံးပြုခြင်း
အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့သည့်အတိုင်းအလားတူအမှားသင့်အိမ်သို့မဟုတ်အလုပ်ကွန်ယက်ချိတ်ဆက်သောသူတို့အားအသုံးပြုသူများအတွက်တွေ့ရှိနိုင်ပါသည်။ ကြောင့်တစ်ချိန်တည်းတော်တော်များများပစ္စည်းတွေမှာမဖြစ်၏နိုင်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုရန်, Active Directory မှဝင်ရောက်ခွင့်နှင့်အတူပြဿနာတစ်ခုရှိသေး၏။ သင်က default အနေနဲ့ပုံနှိပ်ကိရိယာများ set နဲ့ပြန်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းပြန်လုပ်သင့်တယ်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ရုံကိုသွား "ဖုန်းများအတွက်နှင့်ပုံနှိပ်" ဖြတ်. "Control Panel ထဲက", ကိရိယာပေါ်မှာ Right-click နှိပ်ပြီး select လုပ်ပါ "ပုံမှန် Make".
Method ကို 3: "ပုံနှိပ်ပါ Manager ကို" Enable
ပုံနှိပ်စာရွက်စာတမ်းများပေးပို့ခြင်းအတွက်တာဝန်ရှိသည်ဝန်ဆောင်မှုတစ်ခုဖြစ်သည် "ပုံနှိပ်ပါ Manager ကို"။ ဒါဟာစနစ်တကျ၎င်း၏လုပ်ငန်းဆောင်တာလုပ်ဆောင် activated ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုကွောငျ့, သငျသညျမီနူးကိုသွားသင့်တယ် "န်ဆောင်မှုများ" နှင့်အစိတ်အပိုင်း၏ status စစ်ဆေးပါ။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုချထားသည်ကိုဖတ်ရှု ဖြစ်စဉ်ကို6အောက်ကလင့်ခ်ပေါ်မှာငါတို့ကတခြားဆောင်းပါး၌တည်၏။
Read more: Windows တွင် "ပုံနှိပ်ပါ Manager ကို" start လုပ်နည်း
Method ကို 4: Diagnosing
သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ပထမဦးဆုံးနှစ်ဦးကိုနည်းလမ်းများကိုသာအနည်းငယ်ထိန်းသိမ်းရေးလုပ်ဆောင်ပေးရန်လိုအပ်ပါသည်နှင့်အချိန်အများကြီးယူမထားဘူး။ ပဉ္စမနည်းလမ်းနှင့်အတူစတင်ခြင်း, လုပ်ထုံးလုပ်နည်းနည်းနည်းရှုပ်ထွေးဖြစ်တယ်, ဒါညွှန်ကြားချက်မှဆက်လက်မလုပ်ဆောင်ခင်ကျနော်တို့က built-in Windows ကိရိယာတွေသုံးပြီးမဆိုအမှားများကိုအဘို့ပရင်တာစစျဆေးဖို့အကြံပြုသည်။ သူတို့ကအလိုအလျှောက်တညျ့ပါလိမ့်မည်။ သငျသညျအောကျပါလုပ်ဖို့လိုအပ်တယ်:
မီနူးကိုဖွင့် "Start" နှင့်ကိုသွား "Control Panel ထဲက".
တစ်ဦးအမျိုးအစားကိုရွေးချယ်ပါ "Control Center ကိုကွန်ယက်နှင့်မျှဝေခြင်း Center က".
အောက်ခြေတွင်, ဒီ tool ကို click "ပြဿနာဖြေရှင်းခြင်း".
အပိုင်း "ပုံနှိပ်ပါ" အမျိုးအစားကိုရွေးပါ "ပရင်တာ".
စီမံခန့်ခွဲသူအဖြစ် tool ကို run လိုက်ပါ။
ယင်းကိုနှိပ်ခြင်းဖြင့်စကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ start ကိုသွားပါ "Next ကို".
ဒါဟာ tool ကိုအမှားအယွင်းများကိုရှာဖွေသူတို့တွေ့ရှိလျှင်သူတို့ကိုဖယ်ရှားပစ်မည်သာစောင့်ဆိုင်းနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့နောက်အဖြေရှာတဲ့ window တွင်ပြသညွှန်ကြားချက်များကိုလိုက်နာပါ။
Method ကို 5: Configuration ကို Check ကိုအနိုင်ပေး
ဝန်ဆောင်မှုကိုက်ညီအနိုင်ပေးရဲ့ IP-address ကိုအဆုံးအဖြတ်များအတွက်တာဝန်ရှိဖြစ်တယ်, ကွန်ယက်ပစ္စည်းကိရိယာများမှတဆင့်ပုံနှိပ်ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါကထည့်သွင်းစဉ်းစားအမှား၏ချွတ်ယွင်းစေနိုင်ပါတယ်။ အောက်မှာဖေါ်ပြတဲ့အတိုင်းဒီဖြေရှင်းချက်ဖြစ်ပါသည်:
ကိုသွားပါ "ပြောင်းလဲခြင်း adapter settings ကို".
တက်ကြွစွာကွန်နက်ရှင်ကို right-click နှိပ်ပြီးနှင့်ကို select "Properties ကို".
မျဉ်းကိုရှာပါ "အင်တာနက်ပရိုတိုကောဗားရှင်း 4"ဒါကြောင့်ကို Select လုပ်ပါနှင့်ပြောင်းရွှေ့ "Properties ကို".
tab ကို "အထွေထွေ" အပေါ်ကိုကလစ်နှိပ်ပါ "အဆင့်မြင့်".
အနိုင်ပေး settings ကိုစစ်ဆေးပါ။ အဆိုပါအမှတ်အသားအမှတ်အနီးတွင်ရပ်နေရမယ် "ပုံမှန်"သို့သော်အချို့လည်ပတ်မှုကွန်ရက်စီစဉ်ဖွဲ့စည်းမှုအတွက်စနစ်စီမံအုပ်ချုပ်သူကိုသတ်မှတ်, ဒါကြောင့်သင်အကူအညီတောင်းသူ့ကိုမှဖွင့်ရန်လိုအပ်သည်။
Method ကို 6: ယာဉ်မောင်းကိုပြန် install လုပ်များနှင့်ပရင်တာကိုထည့်သွင်း
အနည်းဆုံးထိရောက်သော, သို့သော်အချို့အခြေအနေများတွင်အလုပ်, ယာဉ်မောင်းပုံနှိပ်ကိရိယာများကို uninstall လုပ်လိုက်သို့မဟုတ် reinstall လုပ်ဖို့စဉ်းစား, သို့မဟုတ် built-in Windows ကို tool ကိုကနေတဆင့်ဖြည့်စွက်ရမည်။ ပထမဦးစွာသင်အဟောင်းကိုဆော့ဖျဝဲကိုဖယ်ရှားရပါမည်။ ဒီလိုလုပ်ဖို့ဘယ်လိုအချက်အလက်များအတွက်အောက်ပါ link ကိုတွေ့မြင်:
Read more: အဟောင်းပရင်တာဒရိုင်ဘာကိုဖျက်မည်
Next ကို, သင်အသစ်တစ်ခုကိုယာဉ်မောင်းဒါမှမဟုတ် built-in operating system ကို windose မှတဆင့်ပရင်တာတပ်ဆင်ရန်မဆိုတတ်နိုင် option ကိုထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အောက်ကလင့်ခ်မှာပစ္စည်းအတွက်ပထမလေးနည်းလမ်းများသင်သည်လက်ျာ software ကိုရှေးခယျြကူညီပေးပါမည်ကို၎င်း, ပဉ္စမ၌သငျပစ္စည်းကိရိယာများဖြည့်စွက်အဘို့ညွှန်ကြားချက်တွေ့လိမ့်မည်။
print ထုတ်မယ့်စာရွက်စာတမ်းပေးပို့ဖို့ကြိုးစားနေသည့်အခါအစောပိုင်းကကျနော်တို့ကတပ်ဖြန့်ခြောက်ဦးဆုံးမပဲ့ပြင်မှုနည်းလမ်းများကိုမရရှိနိုင်အေဒီဒိုမိန်း directory ကိုအကြောင်းကိုပြောခဲ့တယ်။ သင်တို့ကိုတွေ့မြင်နိုင်သကဲ့သို့, ထိုသူအပေါင်းတို့ရှုပ်ထွေးအတွက်ကွဲပြားခြားနားခြင်းနှင့်ကွဲပြားခြားနားသောအခြေအနေများတွင်သင့်လျော်သောဖြစ်ကြသည်။ ငါတို့သည်သင်တို့လက်ျာဖြေရှင်းချက်ကိုရှာဖွေသည်တိုင်အောင်, တဖြည်းဖြည်းရှုပ်ထွေးသောမှရွေ့လျား, အရိုးရှင်းဆုံးနှင့်အတူစတင်အကြံပြုပါသည်။
ဗီဒီယို Watch: Active Directory Domain Services ADDS Windows Server 2012 R2 - Instalación & Configuración (စက်တင်ဘာလ 2019).